Sirdoonka Britain oo isbedel lagu sameeyay - BBC Somali
Sirdoonka Britain oo isbedel lagu sameeyay
Image caption Snowden oo ku nool Moscow waxaa doondoonaaya Mareykanka
Xubin ka mid ah dowladda Britain ayaa sheegaya in sirdoonta UK ay ku qasbanaadeen inay meesha ka baxaan, sababo la xiriira Ruushka iyo Shiinaha oo awood u yeeshay inay kala saaraan wararka ay soosaaraan marka ay shaqeynayaan.
Arrintan ayaa imaaneysaa kaddib markii wargeys Britain laga leeyahay oo lagu magacaabo ‘The Sunday Times’ uu ku warramay in khubaro dhanka sirdoonka ah oo ku sugan Moscow iyo Beijing ay awood u yeesheen inay fahmaan qaar ka mid ah dikumiintiyada uu xaday ninkii la shaqeyn jiray sirdoonka Mareykanka, Edward Snowden.
Qofkan u warramay BBC-da waxa uu sheegay in aysan jirin cadeyn muujineyso in arrintan ay qof un waxyeelo kasoo gaartay.
Edward Snowden, oo ka shaqeyn jiray xarunta laanta amniga qaranka ee Mareykanka, ayaa mar qura caalamka laga bartay laba sano ka hor, kaddib markii uu shaaca ka qaaday sida baaxadda weyn ee Mareykanka iyo Britain ay u jaajusayeen internetka iyo telefoonada.
Hadda waxa uu ku sugan yahay dalka Ruushka, laakiin waxaa aad u raadinaya laamaha sirdoonka ee Mareykanka.